ကျွန်တော်တွေးမိတာတစ်ခုက နိုင်ငံရေးဗေဒင် ဟောကိန်းတွေကို အမှန်တစ်ကယ် မှန်ကန်အောင် ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် ဆိုတာ…ဗေဒင်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်တွေ အပြင် .. နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ အသိအမြင် ဗဟုသုတတွေပါ အားလုံးပြည့်စုံ ညီညွတ်နေမှသာ ပြောင်မြောက်တဲ့ဟောကိန်းတွေ ထုတ်နိုင် လိမ့်မယ် လို့ တွေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို သာမန် ဗေဒင်ပညာတစ်ခုထဲကိုသာ သိမြင်တတ်ကျွမ်း နေသူများ အဖို့တော့ မလွယ်ကူပါ။
ဥပမာအားဖြင့် .. နိုင်ငံဇာတာအရ .. တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်က အစိုးရသော ..အခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုနဲ့ … သံတမန်ရေး အရ ကောင်းသော ဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပွားခြင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြားဆိုင်ရာ ကုန်စည်ဖလှယ်မှု တစ်ခုခု ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမျိုး ဖြစ်တော့မယ် ထား၊ ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ အဆိုပါဆက်သွယ်မှုမျိုး တစ်ကယ် လုပ်ဖြစ် နိုင်မလဲ ဆိုတာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင်တွေ ပြည့်စုံမှသာ အမှန်တစ်ကယ် ဆုံးဖြတ်နိုင် ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့လို ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် နောင်အရှည်သဖြင့် ရနိုင်သော ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ် ဆိုတာတွေ ကိုလည်း ..နိုင်ငံရေးအသိအမြင် ကြွယ်ဝနေမှသာ ပိုမိုမှန်ကန်အောင် ကြိုတင်တွေးတော ဆုံးဖြတ် နိုင်စွမ်း ရှိပါမယ်။ သာမန်အားဖြင့် ကတော့ … ဗေဒင်ရှုထောင့်အရ အပေါ်ယံအတိုင်းအတာ မျှသာ ကောက်ချက် ချနိုင်မှာပါ။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးဗေဒင် ဆိုတာကို တိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာ ဟောပြောနိုင်ဖို့အတွက် ဗေဒင်ကျမ်းဂန် ကိုသာမက နိုင်ငံရေးရာ ဗဟုသုတ လည်း ပြည့်စုံကြွယ်ဝ ဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။
တစ်ခါက စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်းတစ်ခု ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက စကားစမြည် စပ်မိရာကနေ နိုင်ငံရေးနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ဗေဒင်ပညာအရ ရှုထောင့်အမြင်ကို မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်က အနည်းငယ် ပြောပြပြီး ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သုတများစွာ မရှိကြောင်း ဒါကြောင့် ဗေဒင်ပညာသက်သက်နဲ့သာ အတန်အသင့် ပြောပြ နိုင်ကြောင်း ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ကနေ တစ်ဆင့် အမေစု အကြောင်း ဆက်မိကြပါတယ်။ အမေစု (၀ါ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗေဒင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်အမြင်လေးတွေကို ပါ အကြောင်း စပ်ပြီး ဆက် ဆွေးနွေးမေးမြန်းလာပါရော …။
ကျွန်တော်က ပြောပြရပါတယ်။ ကျွန်တော် လက်ရိုးဗေဒင်သမားမဟုတ်ကြောင်း။ လက်ဆန်းဗေဒင် လေ့လာ လိုက်စားနေသူသာ ဖြစ်ကြောင်း။ ဒါကြောင့် လက်ဆန်းဗေဒင် ရှုထောင့်အရသာ အချင်းအရာ အချက်အလက် အချို့ကို သိမြင်မိပါကြောင်း ၊ အဲဒါတွေကတော့ ……………………….
အမေစု ရဲ့ မူလ မွေးမဟာဘုတ်ဇာတာအရ အလွန်အရေးပါတဲ့အမည်အဖျားစာလုံးနဲ့ ပက္ခမိထားသော တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကနဦး ရှင်းပြရပါမယ်။
အဲဒီ့လိုမရှင်းပြခင်မှာ … ပိုမိုသိမြင်နားလည်နိုင်အောင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် နဲ့ စပ်လျဉ်းသော သဘာဝအချို့ကို .. သိနှင့်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် … ဆိုတာ ကတော့ တစ်ခြားမဟုတ်ပါ။ လူသားတွေ နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေကြတဲ့ နေမင်း ကို တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်လို့ ခေါ်ဆိုသညာထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေဟာ လူတွေအတွက် အလွန်အရေးပါ အရာရောက်ပြီး …. တစ်စုံတစ်ရာကို လှုပ်ရှားနိုးထ အသက်ဝင်စေ ဖို့အတွက် အဓိက အင်အားပြု ပေးသောဂြိုဟ် တစ်လုံးလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်…
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်၊ အဲဒီ့လူရဲ့ ဂုဏ်သတင်း၊ အဲဒီ့လူကို အများက အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ အမြင် စတာ တွေကိုလည်း ဖော်ပြပါတယ်။ ပြောရရင် ကျယ်ပြန့်လှပေမယ့် ….. အဓိက အနှစ်ချုပ် အားဖြင့် တနင်္ဂနွေဟာ ….အောက်ပါကဏ္ဍတွေကို အဓိက လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။
(၁) ဆုလာဘ်၊ အောင်မြင်မှု ၊ အစပျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများ၊ မူလမူရင်း ကဏ္ဍများ
(၂) အသက် ၊ ရှင်သန်ခြင်း ၊ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ကြီးမြင့်မှု ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု
(၃) နာမည် ၊ တံဆိပ် ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း …စသော တရားဝင် အသိမှတ်ပြုထားသော ကဏ္ဍများ
(၄) အဖ၊ အကြီးအကဲ၊ ထိပ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ အိမ်ထောင်ဦးစီး၊ အားကိုးအားထားရာ အာဝါသ
(၅) အသက်မွေးမှု ၊ အလုပ် နှင့် အိုးအိမ်
ကောင်းပြီ….တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်အကြောင်းတော့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အတန်အသင့် သိပြီဆိုပါတော့။ ဆက်ပြီး…လေ့လာဖို့အတွက် အမေစုရဲ့ မူလဇာတာခွင် ကို သွားကြရအောင်။
အထက်ပါ အမေစုရဲ့ မူလမဟာဘုတ်ဇာတာမှာ ကြည့်ရင် နာမည်အဖျားစာလုံးဖြစ်တဲ့ ကြည် (တနင်္လာနံ) ဟာ အဓိပတိဌာန မှာ ရပ်တည်ထားပြီး၊ မရဏမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ တနင်္ဂနွေ(နေမင်း) နဲ့ ပက္ခ မိနေတာကို တွေ့ရပါမယ်။
ယေဘုယျ အားဖြင့် ဂြိုဟ်တစ်လုံးဟာ ပက္ခမိနေသော အခြေအနေမှာ အားနည်းသွားပါတယ်။ တနည်း အားဖြင့် လိုအပ်ချက်ရှိနေသော အနေအထားကို ဆိုင်ရာဂြိုဟ်ရဲ့ ပရိယာယ်အလိုက် ဖော်ပြပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဘယ်ဌာန မှာ ရပ်တည်ပြီး ပက္ခမိနေသလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရပါတယ်။ အမေစုရဲ့ ဇာတာခွင်မှာတော့ တနင်္ဂနွေဟာ မရဏမှာ ရပ်တည်နေပြီး …. ပက္ခပြုထားတာကို တွေ့ရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ … တစ်ချို့သော သူများအနေနဲ့ မရဏမှာ ရပ်တည်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း အဆိုးဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချ ဟောဆိုနေကြတာကို များစွာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီအတွေးဟာ အင်မတန် မှားယွင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမှားတွေ အရိုးစွဲနေတာဟာလည်း အထက်ပါကဲ့သို့သော တရားသေ ၀ါဒများ ကျင့်သုံးမှုကြောင့်ပါပဲ။
အထက်ပါ အမေစုရဲ့ ဇာတာကဲ့သို့ ငါးခုကြွင်း မဟာဘုတ်ဖွား တွေကို ပဲကြည့်ပါ။ ဥပမာ တနင်္ဂနွေဟာ အောင်မြင်မှုနဲ့ ဆိုင်တာကြောင့် မရဏမှာ ရပ်တည်နေတဲ့အတွက် …မင်း မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ ဟောရတော့မလား။ တနင်္ဂနွေဟာ အသက်မွေးအလုပ်အကိုင်ကိုလည်း ဖော်ပြတဲ့အတွက် ….မင်းတို့ အလုပ်အကိုင် မကောင်းဘူးလို့ပဲ ဟောရတော့မလား။ အထက်အကောင်း အောက်အဆိုး ပုံသေ၀ါဒကိုသာ လက်ကိုင်ထားမယ် ဆိုရင် ဒီဟောကိန်းမျိုး ဟောကို ဟောရတော့မယ်။ အထူးသဖြင့် ဥာဏ်ကို မသုံးချင်ပဲ …သင်ထားတဲ့အတိုင်း ၊ လေ့လာဖူးတဲ့အတိုင်း ခူးခူးခပ်ခပ် အလွယ်တကူသမားတွေကတော့ အဲဒီ့လိုသာ ယူဆ တွက်ကိန်းထုတ်ကြပါလိမ့်မယ်။
မိမိတို့ဥာဏ်ကို အကြောင်းအကျိုးသင့် အားထုတ်တွေးတောမှုပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ့လို မတွေးမိနိုင် တော့ပါ။ ပမာပြုရမယ်ဆိုရင် ……မရဏသည် အဝေး၊ ဓလေ့ထုံးစံ ကွဲပြားသော အသိုက်အ၀န်း၊ ပရနယ်ပယ်၊ လူမျိုးကွဲ ဘာသာကွဲ၊ တိုင်းတစ်ပါး ..နိုင်ငံရပ်ခြား စသည်တို့နဲ့ သက်ဆိုင်တာကြောင့် တနင်္ဂနွေ မရဏမှာ ရပ်တည်နေခြင်းသည်……နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းတစ်ပါး စသော ဝေးကွာသော အရပ်ဒေသများနဲ့၊ ဓလေ့ထုံးစံ ကွဲပြားသော လူမှုအသိုက်အ၀န်း နယ်ပယ်များမှာ အောင်မြင်ခွင့် ရရှိခြင်း ၊ ယင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သော အောင်မြင်မှုများ၊ အသက်မွေးမှုများ ဖြစ်ထွန်းခြင်းကို ဖော်ပြတယ် လို့ တွေးဆမိနိုင်ပါပြီ။ ဒီကနေ့ ပြည်တွင်းမှာ နေစဉ်က ဘာအသက်မွေးမှု မှ လုပ်မရကိုင်မရဖြစ်ရသလောက် …ပြည်ပလည်း ရောက်ရော ….တစ်စ တစ်စ တိုးတက်အောင်မြင်မှု လက်ဝရရှိ ပိုင်ဆိုင်နေကြပြီဖြစ်သော ငါးခုကြွင်း မဟာဘုတ်ဖွားများ ဒုနဲ့ဒေး ဖြစ်တာကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ကာယကံရှင်တွေက ပိုသိကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ အကြောင်းစပ်မိလို့………တစ်ခု …ကြားဖြတ် ပြောခဲ့ချင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ သင်ဟာ ငါးခုကြွင်း မဟာဘုတ်ဖွားလည်း ဖြစ်မယ် …၊ သင့်နေရာ သင့်ဒေသမှာလည်း သင်ဘာမှ လုပ်မရ ကိုင်မရ ၊ အောင်မြင်မှု မရဘဲ ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်….တစ်ဆိတ်လောက်ဗျာ….၊ သင်လက်ရှိနေထိုင်နေရာကနေ အဝေး… အဝေး တစ်နေရာမှာ သင့်အလုပ်အကိုင် သင့်အောင်မြင်မှုအတွက် ကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ အလွန် ကံဆိုးနေသူမျိုး၊ ဖြတ်သန်းဆဲ ဂြိုဟ်အိပ် / ဒသာ စတာတွေအရ အရမ်းအညံ့ကြုံနေသူမျိုးကလွဲလို့ ….ကျန်တဲ့ လူတွေ အားလုံး …မိမိတို့ ကံစွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက် အဝေးမှာ အောင်မြင်တဲ့ကံနဲ့ တွေ့ဆုံ ချမ်းမြေ့ နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဆိုကို မောင်ဖုန်းဆို ပါတယ်။ ဒီအကြံကို မောင်ဖုန်း ပေးပါတယ်။
ရှိစေတော့ ဒါက တစ်ကဏ္ဍ ။ မူလအချင်းအရာဆီ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ချဉ်းကပ်ကြရအောင်။ အမေစုရဲ့ မူလ မဟာဘုတ်ဇာတာ ၊ နာမည်၊ စတာတွေအရ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ဟာ ပက္ခပြုထားလို့ အားနည်းနေသည့် တိုင်အောင် …….. ၊ အမေစုမှာလည်း …အထက်ပါ ကံကို အထင်းသားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ပက္ခပြုထားလို့ အားနည်းခြင်းကြောင့် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလိုပဲ …..တနင်္ဂနွေရဲ့ မူလသဘာဝအရ ဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးကို လည်း ပြုတာပါပဲ။ အဓိက သိမှတ်ထားဖို့က ကောင်းတာနဲ့ ဆိုးတာကို ရောပြီး ခြေဖျက် မပစ်မိဖို့ပါ။ ကောင်းတာက ကောင်းတဲ့ အကျိုးပေးသလို၊ အားနည်းလို့ မကောင်းတာကလည်း မကောင်းတဲ့ အကျိုးကို မသွေမတိမ်း ဖြစ်တည်လာစေမှာပါ။
အမေစုဟာလည်း ငါးခုကြွင်းဖွား ဇာတာရှင် ဖြစ်လို့ …..တနင်္ဂနွေ မရဏ ရဲ့ ကောင်းကျိုးဖြစ်တဲ့ လူမျိုးကွဲ တိုင်းတစ်ပါးနှင့် ဆိုင်သော အောင်မြင်မှုနဲ့ ဆုလာဘ်များကိုလည်း ခံစားရမှာပါပဲ။ အမေစုကတော့ လူသာမန် မဟုတ်သော … ဇာတာရှင်မျိုး ဖြစ်တဲ့အတွက် ရရှိခံစားရတဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ဆုလာဘ်တွေကလည်း လူသာမန်တွေထက် များစွာ အားသာ ကောင်းမွန်လှပါတယ်။
ကောင်းပြီ ဒီလောက်ဆို ရင် မရဏမှာရပ်တည်တဲ့ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ရဲ့ သဘာဝနဲ့ အာနိသင်ကိုတော့ အတန်အသင့် ရိပ်စားမိလောက်ပါပြီ။ ဆက်လက်ပြီး ပက္ခမိခြင်းကြောင့် အားနဲသော သဘာဝ အရ …ဆိုးကျိုး ပြုတတ်ပုံကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
အမေစု ၀ါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ……တနင်္ဂနွေပက္ခ ဇာတာရှင် ဖြစ်သလို ….၊ သူမရဲ့ နိုင်ငံရေး ခရီးစဉ် ကာလများမှာလည်း တနင်္ဂနွေဟာ အထူး လွှမ်းမိုးထားခဲ့ပါတယ်။ အတိတ်ကာလမှာ ခမောက် တံဆိပ်ကို အသုံးပြုခဲ့မှုဟာလည်း တနင်္ဂနွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ကို အထင်အရှား ဖော်ပြနေခဲ့ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေဟာ ဦးခေါင်းတွင် ဆင်မြန်းသော တန်ဆာ (၀ါ) ဦးထုပ် ၊ ခေါင်းစီး၊ ခမောက် စသည်တို့ကို လွှမ်းမိုး ထားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေပက္ခဟာ ဆိုင်ရာ ဇာတာရှင်အတွက် မင်းပြစ်မင်းဒဏ် သင့်မှု နဲ့ အောင်မြင်မှု ရရှိရန် ခက်ခဲ ကြန့်ကြာရခြင်းကို လည်း ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာကတော့ …..ဇာတာရှင်ရဲ့ အသက်ပိုင်း ၅၅နှစ် ကနေ …၆၆နှစ် အထိတိုင်အောင် အဆိုပါတနင်္ဂနွေဟာ ထပ်မံပြီး အင်အားကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုး လိုက်ပြန် ပါတယ်။ ဒီလွှမ်းမိုးမှုကို သတိပြုမိခဲ့တာကြောင့် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ အမေစုနဲ့ ပတ်သက်သော ကံဇာတာကို ကြုံကြိုက် မေးမြန်းခဲ့သူတိုင်းကို အချိန်တွေ လိုသေးတယ် ထင်တာပါပဲဗျာ ဆိုပြီး ပြန်ဖြေဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အင်္ဂါနေ့ဖွား တစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်ရဲ့ အင်္ဂါ သားသမီးများ အပေါ် အာနိသင် ပြုတတ်မှုကိုလည်း ထင်ထင်ရှားရှား သိမြင်နေတာကြောင့် ပါပါတယ်။
တနင်္ဂနွေဟာ အင်္ဂါ သားသမီးတွေအတွက် အဆုံးတိုင်မရောက်ဘဲ လမ်းခုလတ်တွင် တုံ့ဆိုင်းမှု၊ အခြေအနေ အိုင့်နေ အီနေတတ်မှုကို အင်မတန်ပြုတတ်တာကြောင့်ပါပဲ။
ဒီလိုဂြိုဟ်မျိုးက မူလမဟာဘုတ်ဇာတာမှာ မရဏမှာ ရပ်တည်နေပြီး …. နာမည်အဖျားစာလုံး နဲ့ ပက္ခ မိထားခြင်းကြောင့် အားနည်းနေသော အခြေအနေဟာ .. မကောင်းသော တုံ့ဆိုင်းမှု၊ မကောင်းသော သဘာဝဖြင့် အခြေအနေ အိုင့်နေ အီနေတတ်မှုကို မလွှဲမသေ ဖြစ်ပွားနေစေမှာကို တွေ့သာ မြင်သာ နေခဲ့တာကြောင့်ပါပဲ။
ခုတော့လည်း ဒီတနင်္ဂနွေဟာ မဖယ်ချင့် ဖယ်ချင်နဲ့ သူရဲ့ နေရာကို အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့လက်ထဲ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အမေစုရဲ့ အသက်ပိုင်း (၆၇) နှစ်က နေ…(၈၇)နှစ် ထိတိုင်အောင် အင်္ဂါဂြိုဟ်က အမေစုရဲ့ ကံဇာတာကို လွှမ်းမိုးလာပြန်ပါတယ်။ ဒီလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ကဆောင်းပါး အချို့မှာ ဖြစ်ပွားလာနိုင်သော အာနိသင်အချို့ကို ကျွန်တော် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီး ပါပြီ။
အဆိုပါ အင်္ဂါဂြိုဟ်လွှမ်းမိုးရာကာလဖြစ်သည့် ( သောကြာဂြိုဟ်အိပ်ကာလ - ၆၇နှစ် မှ ၈၇နှစ်) ဟာ…..အမေစုအတွက် ရှေးနှင့် မတူသော ၊ ယခင်နှင့်မတူသော ဖြစ်စဉ်များစွာ ပေါ်ပေါက်ကြုံတွေ့ရမယ့် ကာလ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုကိုပဲ အမေစုနဲ့ ပတ်သက်သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်လေးတွေ ပေါ်ပေါက်စ ပြုလာတာကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။
ခက်တာတစ်ခုကတော့….. အဆိုပါကာလများမှာ အမေစုရဲ့ နာမည်ဟာ သိုင်းနင်းကွက်ကျ ဆိုသလို ဆိုးကြိုး စနစ်တစ်ခုထဲမှာ အံဝင်ခွင်ကျ ရောက်ရှိနေပြန်တာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ မူလကတည်းက အမည်ဟာ ပြင်းထန်သော ပက္ခထဲမှာ ပါဝင်နေခဲ့သလို ၊ လက်ရှိဖြတ်သန်းချိန်မှာလည်း…အဆိုပါပက္ခမျိုးထဲ မှာ ဖြတ်သန်း ရမှာမို့…..အသက်အရွယ် ကြီးရင့်ချိန် ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် … အမေစုရဲ့ ဘ၀တိုက်ပွဲတွေကတော့ အရှိန် လျော့ပါး သွားမှာ လုံးဝ မဟုတ်ပါ။
တနည်းတစ်ဖုံ တစ်မျိုးပြောင်းလို့ ….အားကောင်းစွာနဲ့ အားပြိုင်မှုတွေ ၊ ရင်ဆိုင်မှုတွေ ၊ ရန်သူတွေ၊ တိုက်ပွဲ အသစ်တွေ အစပျိုးလာတော့မှာ သေချာပါတယ်။ မောင်ဖုန်း စိုးရိမ်မိတာတစ်ခုကတော့ ဒီတစ်ခါ ….လာတဲ့ ရန်သူဟာ …ရှေ့ကလာမယ့် ရန်သူမျိုး မဟုတ်ဘဲ နောက်က ချဉ်းကပ်လာမယ့် ရန်သူမျိုး ဖြစ်နေမှာကို စိုးရိမ်မိလှပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်တော့ အတွင်းဘက်ရန်သူ၊ အတွင်းစည်းက ရန်သူမျိုးတွေ ကို အမေစု အနေနဲ့ အထူးဂရုပြုရမယ့် ကာလတစ်ခုကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။
ထားပါတော့ ….ဆောင်းပါးလည်း ညောင်းခဲ့ပါပြီ။ အဓိက အနှစ်ချုပ်ရရင် ……
(၁) အမေစု အနေဖြင့် …နောက်ကျောဘက်မှ ရန်သူကို သတိပြုမိရန်
(၂) အပြန်လမ်း၊ အပြန်ခရီးစဉ်၊ ပြန်လာသည့်ခရီးစဉ်ကဲ့သို့ နောက်ကြောင်းပြန်ခရီးစဉ်များ၊ တစ်ကျော့ပြန် ခရီးစဉ်များ တွင် အထူးသတိပြု သွားလာရန်
(၃) ကြာသာပတေးနေ့များ ၊ ကြာသာပတေးနံသင့် မြို့ရွာ၊ အရပ်ဒေသ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ပတ်သက်၍ သတိပြုရန်
အထူး လိုအပ်လာပြီဖြစ်သော အချိန်ကာလများကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ကောင်းပြီ …ဒီအပိုင်းအထိဟာ နိုင်ငံရေးဗေဒင် နဲ့ မသက်ဆိုင်သေးပါ။ အမှန်ပြောရရင်တော့ … လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကံဇာတာ အနေထားကို ဗေဒင်ပညာနဲ့ တင်ကြိုခန့်မှန်းတွက်ဆ ရုံမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းရဲ့ အစကနဦး ရည်ရွယ်ရင်းကိုလည်း မရောက်သေးပါ။ ကျွန်တော် အဓိက တင်ပြလိုသော အချင်းအရာလည်း မဟုတ်သေးပါ။
အဓိက တင်ပြလိုသော အချင်းအရာကတော့………လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မင်းအစိုးရ နာမည်နဲ့ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို ထောက်ဆ တင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကံဇာတာကို ထောက်ဆ ခန့်မှန်းရာမှာ အမေစုရဲ့ ကံဇာတာကိုလည်း တင်ကြိုထောက်ဆကြည့်ဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် အမေစု ဇာတာကို ကနဦး တင်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး အနေအထားအရ အရမ်းရှည်လျားနေပြီဖြစ်လို့…..နောက်ဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့ သံလျက်ပိုင်ရှင် တို့၏ အမည်များ ဆောင်းပါးမှာပဲ …မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိမင်းအစိုးရ နဲ့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေ ကို ထပ်မံ ထောက်ဆရေးသား ဖော်ပြပေးသွား ပါမည်ခင်ဗျား။
အားလုံးသော စာဖတ်သူများကို လေးစားသမှုဖြင့်